ပိန်းစွယ်ချဉ်စပ် နှင့် ပိန်းစွယ်ဟင်းခါး ~ စန္ဒကူး
အခုရက်ပိုင်း ဈေးနေ့မှာ ဈေးသွားရင်ရှည်မျောမျောအရိုးလေးတွေရောင်းတာတွေ့တယ်။ စိတ်ဝင်စားလို့ သွားမေးတော့ သူတို့စကားနဲ့သူတို့ဖြေတော့ ကျွန်မလဲနားမလည်ဘူး။ ဒီကလူတွေ အင်္ဂလိပ်ကို နေ့စဉ်သုံးစကားလို ကျွမ်းကျင်ပေမယ့် ဈေးနေ့မှာ အိမ်စိုက်ခင်းက လာရောင်းတဲ့ဈေးသည်တွေကတော့ တောင်ပေါ်ကဆင်းလာ တာမို့ အင်္ဂလိုဂဏန်းလောက်သာပြောတတ်တယ်။
နှစ်ခါမြောက်သွားသွားမေးပြီးတော့ မနေ့ညနေက ဈေးကအပြန်မှာ ထိုင်းကအမကြီးနဲ့ ဈေးတန်းဖက်လျှောက် အလာ၊ သူက အဲဒီအရိုးတွေဝယ်တယ်.. ဒါနဲ့အတော်ဘဲ စားလို့ရတာသေချာတယ်ဆိုပြီးကျွန်မလဲဝယ်လာ တယ်။ အဲဒါ ပိန်းစွယ်ပေါ့လေ...ပိတ်စွယ်လို့များခေါ်သလားမသိဘူး..ကြားဖူးတာ..း)))
တစ်သက်မှာ တစ်ခါမှမစားဖူးလို့ မျောက်အုံးသီးရသလို ပျော်နေတာ အရမ်း... အာရှသူဖြစ်ရတာ တယ်ကံကောင်းတာလား.. အစုံစားလို့ရတယ်..း))
သူကပြောတယ် အုန်းနို့နဲ့ချက်စားရင်ကောင်းတယ်တဲ့... ကျွန်မ အဲဒီညနေက ဟင်းခါးလုပ်သောက်တယ်..
ကောင်းမှကောင်းး...... ဒီနေ့တော့ ချဉ်ပေါင်မရှိလို့ မာမီတစ်ကူးတစ်က အခြောက်လှမ်းပေးထားတဲ့ ကင်ပွန်း ချဉ်ခြောက်နဲ့ချက်တယ်... ဒါလဲရှယ်ကောင်းတာဘဲ...
ဒီနေ့ချက်တဲ့ပိန်းစွယ်အချဉ်ချက်ကိုတော့ အချဉ်အတွက် ကင်ပွန်းချဉ်ရွက်သုံးပါမယ်။ ချဉ်ပေါင်နဲ့လည်း ကောင်းတယ်လို့ ညီမ၀မ်းကွဲလေးက ပြောပြပါတယ်။
ပိန်းစွယ်ကို အရင်းဖြတ်ပြီး ငရုတ်ကျည်ပွေးလေးနဲ့ နဲနဲပြားအောင်ထုပြီး ဖြတ်
ဒယ်အိုးထဲကို ရေနဲနဲထည့်ပြီးနူးအောင်အရည်တည်ပါ၊ ဆားနဲနဲထည့်ပါ။
ပိန်းစွယ်လေးတွေနဲနဲနွမ်းလာရင်တော့ ကင်ပွန်းချဉ်ရွက်ကိုပါထည့်၊ ရေထပ်ထည့်ပါ။
နှစ်မျိုးလုံးနူးအိလာရင်တော့ ကြက်သွန်နီ နိုင်နိုင်ပါးပါးလှီးထည့်ပါ။
ကြက်သွန်ဖြူ လဲ ၂ မွှာလောက်ထောင်းထည့်ပါ။
ငပိစိမ်းစား (သို့) ငါးငံပြာရည်နဲနဲထည့်ပါ။ ဆက်မွှေပါ
ကြက်သားခဲ ထည့်ပါ (အချိုမှုန့်အစားသုံးတာပါ၊ အချိုမှုန့်ကြိုက်သူများ အချိုမှုန့်သုံးနိုင်ပါကြောင်း)
အားလုံးနူးအိအောင် မွှေပြီးရင်တော့ နနွင်းမှုန့်၊ ငရုတ်သီးမှုန့်၊ ငရုတ်သီးစိမ်း နဲ့ ဆီကို နောက်ဆုံးမှ ထည့်ပါ။
ဆီထည့်ပြီးချက်ချင်းမမွှေပါနဲ့အုံး.. ဆီစိမ်းနံ့ရတတ်လို့ပါ.. ဟင်းအိုး ဆူလာမှ ဆက်မွှေပါ..
ပြီးရင်တော့ အပေါ့ငံမြည်းပြီး ချလို့ရပါပြီ။
ဒါကတော့ အင်မတန်အရသာရှိတဲ့ ချဉ်စပ် ပိန်းစွယ်ဟင်း တစ်ခွက်ပါ။
ပိန်းစွယ်ကို အရင်းဖြတ်ပြီး ငရုတ်ကျည်ပွေးလေးနဲ့ နဲနဲပြားအောင်ထုပြီး ဖြတ်ထားပါ။
ရေနွေးပွက်ပွက်ဆူရင် ကြက်သွန်ဖြူကို ညက်ညက်ထောင်းပြီးထည့်။
ငပိစိမ်းစားလေးနဲနဲထည့်၊ ကြက်သားခဲလေးထည့်၊ ဆားထည့်
ဖြတ်ထားတဲ့ ပိန်းစွယ်လေးတွေထည့်... နဲနဲဆူအောင်ထပ်တည်။
ငရုတ်ကောင်းမှုန့် နိုင်နိုင်ထည့်ပြီးရင်တော့ ရှောက်ရွက်လေးနဲနဲ ဖြတ်ထည့်လိုက်ပါ.
Posted by Sandakuu at 10:55 AM
တစ်မျိုးလေးပါလား နော် အဲဒီပိန်းစွယ်ကို မမြင်ဖူးသေးဘူး စားလဲမစားဖူးဘူး
စားကောင်းမဲ့ပုံလေးဘဲ ချဉ်ချဉ်စပ်စပ်ဆိုတော့ ပိုတောင်ကြိုက်သေး
အစ်မကူးကူးဆီလာရင် အဲ့ဒီလို ကိုယ် မစားဖူး၊ မမြင်ဖူးတာလေးတွေ တွေ့ရလို့ ပျော်တယ်း) ပိန်းစွယ်ကို ဓာတ်ပုံနဲ့ပါ တင်ထားတော့ ဗပာုသုတလည်း ရသွားတယ်။ ပိတ်စွယ်ကို မြန်မာပြည်မှာ တုန်းကလည်း မစားဖူးဘူး။ အခုဆို ပိုဆိုးပြီ။ မြည်းချင်လိုက်တာ။ အသီးအရွက်ဆို အကုန် ကြိုက်တယ်။
မမကူးရေ.. နာမည်ဖတ်ရုံနဲ့တင် စားချင်လာပြီ.. ချက်စားဦးမယ်.. ကျေးဇူး မမ..
ချဉ်စပ် ပိန်းစွယ်ဟင်းလေးက စားချင်စရာလေး
အာရှသားဖြစ်ရတာ ကံကောင်းလှပေါ့ အစ်မကူးရေ.. စုံနေအောင်စားရတယ်ဗျ... ကျနော်တို့ တော့ အကြိုက်ပဲပေါ့..... :)
အစ်မရေ ညီမတို.ကရခိုင်လူမျိုးတွေဆိုတော.ပိန်စွယ်ဟင်းကိုပိုလို.တောင်ကြိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ.ချက်နည်းကတော.မတူဘူးနော်........comment ရေးထားတဲ.လူတော်တော်များများပိန်းစွယ်ကိုသိပ်မသိကြသလိုပဲနော်...ပိန်းစွယ်ဆိုတာမိုးတွင်းရောက်ရင်လမ်းတွေမှာအလေ့ကျပေါက်ရောက်နေတဲ.ရိုးရိုးပိန်းပင်ကနေထွက်လာတဲ.အစွယ်တွေကိုပိန်းစွယ်လို.ခေါ်တာပါ....ပိန်းစွယ်တွေကိုသေချာမလုပ်ရင်တော.ချက်စားတဲ.အခါယားတတ်ပါတယ်......မန်းကျည်းပြုတ်ရည်နဲ.တစ်ရေလောက်ပြုတ်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်...
တို့အရပ်မှာတော့ ပိတ်စွယ်လို့ခေါ်ပါတယ် အရမ်းလဲစားလို့ကောင်းပါတယ်...
အပေါ်က မဇင်လေးပြောသလိုပဲ အိမ်မှာက ရခိုင်လိုပဲ ပိန်းစွယ်ကိုချက်တယ်..သဗြုသီးနဲ့ ပိန်းစွယ်ချက်လေးပါ..အရမ်းကြိုက်တဲ့ ဟင်းတခွက်ပေါ့..ပိန်းစွယ်က ချွဲချွဲလေးလေ..ပိန်းပင်က ထွက်တဲ့ အစွယ်လေးတွေပါ.မချက်တတ်ရင်ယားတယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်..ပိတ်စွယ်နဲ့ ပိန်းစွယ်က မတူသလိုပဲ..ညီမတို့သိတဲ့ ပိတ်စွယ်က မှိုချောင်းလေးတွေနဲ့ဆင်တယ်..ရေနံချောင်းက ညီမလေးတယောက် အပြန်လက်ဆောင်ပေးလို့စားဖူးတာပါ..ထင်တာက ကြာဇံချက်မှာထည့်ချက်တဲ့ အဖြူရောင် အချောင်းလေးတွေလေ အဲ့ဒါနဲ့ ဆင်သလိုပဲ.. မှားတာရှိရင်ခွင့်လွှတ်ပါနော်..
Hi there! Quick question that's completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My weblog looks weird when viewing from my iphone 4. I'm trying to findatemplate or plugin
The clearness in your post is just cool and i could suppose you're knowledgeable in this subject. Well with your permission let me to clutch your feed to keep up to date with forthcoming post. Thank you one million and please keep up the rewarding work.
My weblog :: Mfsp.Cmc.Msu.Ru
My site - social media training courses
I go to see each day some web pages and information sites to read articles, however this web site gives
Look at my web page: small business web hosting companies
Here is my webpage: dryer repair Valrico
presentation but I to find this topic to be really something that I think I
my web site ... Appliance Repair Clearwater